Maqaallada ku saabsan Kanada
safar, nolol, shaqo, waxbarasho Kanada
November 16, 2020 Antika Kumari Canada, shaqo
Shaqooyinka Kanada waxay siiyaan fursad badan dadka ajaanibta ah ee doonaya inay yimaadaan Kanada oo shaqeeyaan. Shaqada iyo Shaqaalaynta Kanada hawl badan maahan; waxaad si dhakhso leh ugu guuleysan kartaa riyadaada. Kanada waxay leedahay dhaqaale wanaagsan oo leh fursado badan
October 20, 2020 Karuna Chandna Canada, fiisada
Dalxiisayaasha Baakistaan, Kanada ayaa caan ku ah, had iyo jeer u furan dalxiisayaasheeda. Sababtoo ah fiisooyinkiisa fudud iyo siyaasadaha socdaalka, Pakistaniyiinta waxay jecel yihiin inay soo booqdaan ama ku noolaadaan Kanada. Iyo hadaad booqato Kanada sanadka 2020 aadna rajeyneysid inaad hesho macluumaad.
June 15, 2020 Antika Kumari Canada, caafimaadka
Kanada waxay leedahay isbitaallo wanaagsan, gaar ahaan Montreal iyo Toronto. Intaa waxaa dheer, Cisbitaalada Kanada mararka qaarkood waxay la shaqeyn karaan barnaamijyada daryeelka caafimaadka ee ballansashada ballamaha. Hoogay, inta badan kiisaska barnaamijyadu waxay u baahan yihiin lambar aqoonsi Canadian ah. Cisbitaalada ugu wanaagsan Kanada waa: Toronto General
Sida Loo Dalbado Magangalyada Caalamiga ah ee Kanada
April 18, 2020 Shubham Sharma Canada, qaxootiga
Haddii aad tahay qof ilaalin ka raadinaya Kanada, markaa waxaad u baahan kartaa inaad raacdo tallaabooyin gaar ah. Dowlada Canada ayaa soo saartay tilmaamo kala duwan oo ku saabsan magangalyo doonka. Tilmaamahan wuxuu kaa caawin doonaa inaad hesho macluumaadka ku saabsan sida loo sameeyo